Ngingazilungiselela kanjani ukuhlangabezana neLangabi lami lamawele? - Mytika Speak
Ikhaya / Amalangabi Amabili Nothando Olungcwele / Ngingazilungiselela kanjani ukuhlangabezana neLangabi lami lamawele?
Sebenza ngaphakathi kwakho. Yazi ifayili lakho le- Okwangempela. Zindla. Beka inhloso yakho ku indawo yonke ukuthi uzizwa ukulungele futhi uvulekile ukuhlangabezana ne- I-Twin Flame. Ngemuva kwalokho vele uyiyeke. Uma kuhloswe ukuba kube, kuzokwenzeka.
Enye indlela yokulungiselela ukuhlangana kwakho futhi ukusebenza ngezinkinga zomuntu siqu ozaziyo. Awusebenzeli izindaba zakho wedwa, uzilungiselela newele lakho. Uma une isifundo udinga ukufunda, bese wenza inqubo bese uyifunda. Kwenze ukuze ungadingi ukufunda lezo zifundo ezithile nabo lapho nihlangana futhi. Izikhunta zokuphila zikulolonge njalo futhi kuhlala kunesizathu esiqondile. Lapho nobabili niqondene, ithuba lokuhlangana lizovela.
Abantu abaningi bacabanga ukuthi lapho behlangana nelangabi labo lamawele, impilo izophelela ngokushesha. Lokhu akunjalo ngempela. Kunezinkinga futhi nizosebenza ngalezo zinkinga ndawonye. Uyokhubeka uthole indlela yakho munye.
Ilangabi lami kanye namawele ami sizibonele mathupha le nqubo futhi sesihlanganiswe isikhathi esingaphezu kweminyaka eyishumi. Ngaleso sikhathi, sifunde izifundo ezingaguquguquki, okokuqala ngombono bese kuba wukusebenza komhlaba wangempela. Kube nezikhathi ezinzima nezinselelo eziningi. Kukho konke lokho siye sakhuthazela futhi sahleka kwaze kwafika isisu esibuhlungu, ngisho nangezikhathi ezinzima kakhulu. Sibonile izinto ezimangalisayo futhi sikhule ndawonye saba yunithi eqinile. Udaba lwethu ngalunye olusele lwenziwe ngomunye njengendlela yokuluhlukanisa nokuluhlula. Ngempumelelo ngayinye, impilo iye yaba ngcono futhi sike sabona amazwibela asondele futhi asondele ezulwini lethu. Ngokwehluleka ngakunye, sifunde okuningi futhi ekugcineni kwabaguqula baba yimpumelelo. Kuyinkqubo enzima, futhi kwesinye isikhathi kungabonakala sengathi umhlaba wonke umelene nawe, kepha imivuzo iyamangalisa.
Amathegiukuqonda uthando lwaphezulu ukuthanda ukukhula komuntu siqu hlanganisa futhi ingokomoya Amalangabi Amabili
February 13, 2021 at 6: 04 pm
February 13, 2021 at 6: 05 pm
Isayensi kanye nokomoya kuhlobene kanjani?
Ingabe wonke umuntu unamalangabi amabili?